काठमाडौँ उपत्यकामा को’रोनाको उच्च जो’खिम सतर्कता अपनाउन आग्रह ! [जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ] – Sanchar Patrika
काठमाडौँ उपत्यकामा को’रोनाको उच्च जो’खिम सतर्कता अपनाउन आग्रह ! [जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ]
July 7, 2020 239
काडमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यका को’रोना स’ङ्क्रमणको दृष्टिबाट अति उच्च जो’खिममा परेको छ । सोमबार मात्र देशभरका कुल १८० जना स’ङ्क्रमितमध्ये ५४ जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन् ।तीमध्ये काठमाडौँका २४, ललितपुरका २० र भक्तपुरका १० जनामा को’रोना स’ङ्क्रमण देखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा को’रोना सङ्क्र’मण पुष्टि भएको यो धेरै सङ्ख्या हो  ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौँ उच्च जोखिममा पर्दै गएको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार चाँगुनारायण, हरिसिद्धि लगायतका क्षेत्रका मानिस स’ङ्क्रमित रहेको र स’ङ्क्रमितको विगत जानकारी पाउन नसक्दा उपत्यका जो’खिममा पर्दै गएको हो ।,यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
Prevटिकटकको भु’त : भारतमा टिकटक प्र’तिबन्ध भएपछि १८ वर्षीयाले गरिन् आ’त्मह’त्या, सुशान्तकी ४५ वर्षीया प्रशंसकले पनि रोजिन् मृ’त्यु
Nextआज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन ,कसरी मनाउदैछन् ?